Xafiiska Tababarada Xirfadaha iyo Farsamada (TVET)ka DDSI oo Tababar u Furay 70 Kamida macaliminta kuliyada caafimaadk. - Cakaara News
Xafiiska Tababarada Xirfadaha iyo Farsamada (TVET)ka DDSI oo Tababar u Furay 70 Kamida macaliminta kuliyada caafimaadk.
Jigjiga(CN) Isniin Sept-14-20115, Waxaa ka furmay maanta tababar 10 maalmod socondoona kuliyada Caafimadka ee jigjiga (Jigjiga Health Sc.college) macalimiinta kuliyada oo ay tiradoodu dhantahay 70 bare.
Tababarkan oo uusoodiyaariyay Xafiiska Tababarada Xirfadaha iyo Farsamada (TVET)ka DDSI tababarkan ayaa waxay macalimiintu ku baran doonan maadoyin iyo culuum kala gadisan oo la xidhiidha Xirfadooda muhiimna u'ah nidaamka baris barasho Ee kuliyada islamarkaana tababarkan waxaa bixinaya macalimiin aqoon dheerada uleh hawshan.
Wasiir kuxigeenka Xafiiska Tababarada Xirfadaha iyo Farsamada (TVET)ka DDSI mudane C/risaaq saxane oo furitaankii ka hadlay ayaa sheegay in xafiisku ku hawlan yahay sidii uu kor ugu qaadi lahaa nidaamka iyo tayada baris-barasho ee kuliyadaha deegaanka si loo helo cudud waxbaratay oo ku gaashaaman xirfado iyo aqoon ay ku daboolaan baahiyaha iyo adeegyada ay bulshada DDSI u baahan tahay.